Shaqaalihii ICAO Ee Hargaysa Laga Eryey Oo Ka Hawl Galay Garowe
B B FD C B E E C
Shaqaalihii ICAO Ee Hargaysa Laga Eryey Oo Ka Hawl Galay Garowe. Wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland. Xuseen Cismaan Lugatoor (Gabiley) oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Garoowe.
Ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha Garoowe. Loo soo wareejiyay shaqaale ka tirsanaa hay’adda qaramada midoobay ee ICAO oo ka hawl-geli jiray Garoonka Diyaaradaha magaalada Hargeysa. Kadib markii Somali-land ay soo cayrisay shaqaalahaasi.
Wasiirka ayaa sheegay in Somaliland ay shaqada ka joojisay dhammaan shaqaalihii ka tirsanaa hay’adda ICAO ee ka hawl-geli jiray Garoonka Diyaaradaha magaalada Hargeysa. Kadib markii hay’addu ay maamulka Hawada Soomaaaliya ku wareejisay dowladda Federaalka.
ICAO ayaa Hawada Soomaaliya soo maamulaysay mudadii uu burburkajiray. Balse waxay si rasmiya dowladda Soomaaliya ugu wareejisay 28-December-2017.
Gabiley ayaa sheegay. In Garoonka Diyaaradaha magaalada Garoowe laga shaqa-geliyay sagaal qof oo ka tirsan Shaqaalihii hay’adda ICAO, kuwaasi oo todoba kamid ah ay yihiin kuwii ka hawl-geli jiray Garoonka Diyaaradaha Hargeysa ee Somaliland shaqada ka cayrisay, halka labada kalena laga soo beddelay Garoonka Boosaaso.
53 mins ago 23,613 0